"जब शेरबहादुरहरु जनतालाइ हप्काउछन " :- लक्ष्मण सिटाैला - Janapukar
"जब शेरबहादुरहरु जनतालाइ हप्काउछन " :- लक्ष्मण सिटाैला
आफ्नो सबै बम्शजको बिनास पछि पान्डवहरुलाइ पृथ्वी लोकमा बसिरहन गाह्रो भयो । र एक दिन धर्मराज युधिस्ठर सग ज्युदै स्वर्ग जान भनेर द्रौपती सहित पाँच पान्डव उत्तराखन्ड लागे। बाटोमा जाँदै गर्दा अग्निदेव सग भेट भयो र अर्जुनले काधमा बोकेको धनु देखे र अर्जुनलाई भने -"स्वर्गमा कस्लाइ जित्नुछर र कस्लाइ मार्नुछर अर्जुन यो धनु बोकेर लैजादै हुनुहुन्छ यो धनु यतै फ्याक्नु" भनेर फ्याक्नु लागाए। हिड्ने क्रममा पहिला द्रैपती हिउँमा चिप्लिएर मरिन। युधिस्ठर बाहेक सबै हिम आधिमा चिप्लिएर मरे। बाकी रहे युधिस्ठर र कुकुर । इन्द्रदेवले कुकुर लिएर स्वर्ग जान पाइदैन भनेपछि आफुलाइ पछ्याउँदै आएको कुकुर लाई स्वर्ग लान नदिने हो भने म आफू पनि स्वर्ग जान्न भनेपछि देवराज इन्द्रले अनुमति दिए र कुकुर सहित ज्युदै स्वर्ग गए युधिस्ठर । धर्मराजको कुकुर मोहले देवराज इन्द्र खुशी भए र दुवैलाई स्वर्गमा स्वागत गरे। मानवनैत थिएनि युधिस्ठर तर उनको पशु प्रेमले उन्लाइ ज्युदै स्वर्ग पठायो । हामी आज पर्यन्त पनि कुकुर लाई माया गर्छौ गाली गर्दैनौ ।
नेताका आखामा भोट दिने जनता युधिस्ठरको कुकुर भन्दा पनि तल्लो दर्जामा परे । जब एक भोटले चुनाव हारिन्छ तब भोटको कति महत्व हुन्छ त्यो बेला महसुस हुन्छ नेतालाई । जनताको मतको कदर न हिजो इतिहासमा थियो न आज छ। दोहोरिएर जो कोहि चुनाव जितेर आएपछि त्यो नेतामा दम्भ सुरुहुन्छ । जुवाको खालमा एउटाि निरीह द्रौपतीलाइ बेस्या भनेर घिसार्ने दुस्सासनको जस्तो व्यवहार देखाउने शासक यो देशलाई काम छैन , न पुत्र मोहमा छोराको अत्याचार लाई हासेर स्वागत गर्ने अन्धा नरेश नै काम छ । त्यस्ता नरेश र नेताहरू लाई अन्तत समयले पाखा लगाउने छ ।
दलहरूमा दम्भ देखियो भने जनताले ठेगान लगाउने छन । मदोन्माद पालेर दम्भ देखाउनेलाइ ब्यालेट बक्सले तह लगाउनेछ । लोकतान्त्रिक शाशन ब्यवस्थाको सुन्दर पक्ष भनेको चुनावनै हो र चुनाव त्यस्तो माध्यम हो जस्को कारण जनता आफू मालिक हुन पाउछ ।बिसौ बर्ष पछि नेपालमा स्थानीय चुनाव भयो। नेपाली जनताले आफ्नो सुन्दर अभिमत जाहेर गर्ने मौका पाए । जनता जनार्दन हुन ती कसैका रैती होइनन । अफुलाइ भोट हाल्ने जनतालाई , आफुलाइ यो देशको सर्वोच्च तहमा पुर्याउने भगवान लाई किन गाली गर्नु ? किन हप्काउनु ? किन दुत्कार्नु किन छिछि र दुर दुर गर्नु ? अन्तत जनताको दैलोमा फर्किनु छ एकदिन भने । स्वर्ग बाट पृथ्वीमा कहिले फिर्ता नआउने धर्मराजले कुकुरलाइ के माया गर्नु जरुर थियोर ? फेरि कुकुरलेत भोट पनि हाल्दैन। मान्छेलेत भोट हाल्छ नि अनि खैत आफ्नो भोटर लाई सम्मान गरेको ?
शेरबहादुर देउवा पटकपटक यो देशको प्रधानमन्त्री हुनुभयो । उनी अभिवावक हुन । हिजो प्रधानमन्त्री नभएको दिन ऊनी एउटा पार्टीको अध्यक्ष मात्रैत हुनुहुन्थ्यो तर जब प्रधानमन्त्रीको सफत खाए ऊनी तीन करोड नेपालीका शिर हुन। गहना हुन । पिता समान हुन । नेपाली सबैले उनीबाट आशा राख्छन। उनी आशा र अपेक्षाका त्यो इन्द्र्धनु हुन जस्को सबै रङ्गमा नेपालीको भावना प्रतिबिम्बित हुन्छ । मैले शेयरबहादुरज्यू लाई महाभारतको युधिस्तिर बन्नुपर्छ भनेको होइन । धर्मराजले कुकुर लाई माया गरेजस्तै शेरबहादुरज्यूले पनि कमसेकम मान्छे लाई माया गरिदिएको भए कति मजा हुन्थ्यो होला भनेर चिन्तन गरेको मात्रै हु । अरुलाइ आवेगमा हप्काउन सजिलो छ। उहाँले कस्लाइ हप्काउनु भयो के कारणले हप्काउनु भो त्यो महत्वपूर्ण होइन तर एउटा बाबू समानको उच्च ओहोदामा आसिन सम्मानित ब्यक्तिले त्यसरी रिस पोख्नु मिल्थ्योत ? धर्मराजको कुकुर भन्दा पनि मुल्यहिन रहेछन नेपाली जनता प्रधानमन्त्रीज्यूको आखामा ।
कोहि पुरुषार्थी बन्छु भनेर बनिदैन। सन्कल्पत आफ्नो ठाउमा छ तर नियतीको बसमा छ आजको मानिस । ठुलो दुर्घटना हुन्छ। जस्लाइ त्यो दुर्घटनामा जिवित हुन लेखेको छ त्यो मर्दै मर्दैन । कुनै दुर्घटना बिनै मानिस मर्छन। हाम्रो बसमात हाम्रो श्वासप्रश्वास पनित छैननि ।मानिस आफ्नो बशमा आफै छैन । उहाँलाइ परिवेशले बनायो प्रधानमन्त्री , यो नियतिले बनाइदिएको हो चौथोपटक प्रधानमन्त्री । के उहाँ भन्दा अब्बल कोटिका बौद्धिक नेता थिएननर नेपाली काग्रेसमा ? तर नियती उनको हातमा आएर बलियो बन्यो र बनिदिए पुन पुन प्रधानमन्त्री । नेपालमा आफ्नै पुरुषार्थले प्रधानमन्त्री बन्नेमा एक दुई बाहेक अरु कोहि छैनन। रास्ट्रको जिम्मेवारी बहन गर्ने मान्छेले किन मान्छेलाइ चाहिँ दोहन गर्न खोजेका हुन बुझ्न गाह्रो भयो।
नेपाली जनता शासकको गाली नै खान जन्मेका रहेछन। हिजो राणा कालमा गालि र मृत्युदण्डको सजाए भोगेकै हुन । कुरो शेयरबहादुरको मात्रै होइन । एक कार्यकाल भन्दा बढी प्रधानमन्त्री पद खान नमिल्ने गरेर अब सबिधानमा उल्लेखित हुनुपर्छ वा कार्यकारी पद जनता बाट प्रत्येक्ष चुनियर आउनुपर्ने अनिवार्य ब्यवस्था गर्नुपर्छ। प्रधानमन्त्री भएपछि जङ्बहादुरको जस्तो शैली देखाउने नेता अब नेपाललाई काम छैनन । सोझोमा किसुनजी शुशिलदा जस्ता पनि ठिक भएनन र रिसाहामा देउवा जस्ता पनि ठिक हुदैनन् । गगन थापाहरु जस्ता युवाहरूलाई बिश्वास गर्नुपर्छ अब नेपाली काग्रेसले ।
जव जब शेयर बजारमा शेयरको मुल्य घटछ अनि शेयर ब्यापारीको मुटुमै प्वाल परेको जस्तो देखिने व्यवहार यो देशका प्रधानमन्त्री र सार्वजनिक पद धारण गरेका ब्याक्तिहरुले देखाउनु भएन । पद सधैं स्थाइ हुदैन । पदको दम्भमा अढेस सधैं लाउन पाइदैन भन्ने कुरा बुझ्नु जरुरी छ । हिजो निर्दलमा खोइ कस्ले देखायोर निर्ममता? एकाध छिटपुट घटनात जहिले पनि हुन्छन । हिजो मावोवादी पहिलो पार्टी आज तेस्रो भयो। टुक्राटुक्रामा बिभाजन । तिमीहरू आफैत मिल्दैनौ भने जनतालाइ कसरी मिलाउछौ भनेर अहिले तेस्रोमा पारे । आखिर पहिलो पार्ने पनि उहीँ जनता र तेस्रो चौथो पार्ने पनि उहि जनता । त्यसैले जनतालाई सम्मान र मायाको नजरले हेरु नकि नजरले कोपर्नी गरेर हप्काउने गरेर होइन ।